Tips Fa mpitety By Train Amin'ny Kids In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Tips Fa mpitety By Train Amin'ny Kids In Eoropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 06/10/2020)
Milamina sy mahafinaritra. Teny roa tsy dia henonao matetika ampiasain'ny ray aman-dreny rehefa miteny azy ireo fialan-tsasatra Tsidika tantara amin'ny ankizy. Noho izany, izahay dia nanapa-kevitra ny hanome anao ny toro-hevitra manan-danja indrindra amin'ny dia amin'ny lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eropa.
Misy zavatra momba ny fiaran-dalamby fotsiny izay Mampitony ny ankizy amin'ny fomba izay rivotra na ny fiara tsy Tsidika. (Nanoratra manontolo izahay bilaogy ny antony fiarandalamby mandeha tsara kokoa haingana ary Tsara kokoa noho ny Driving Raha toa ka mila mandresy lahatra kokoa). Izany ihany koa ho an'ny olon-dehibe ihany koa! Family latabatra, mandalo ny endriky ny, efitra handeha manodidina, Cafe trano, fotoana mba hiresaka sy hahatratra ary, ny fifaliana ny fifaliana, tsy misy famerana entana. Mandalo rail azo antoka, aina sy ny takatry rehefa nikasa mialoha. Ampianaro ny Zanakao ny fifaliana ny fiaran-dalamby Tsidika hatramin'ny mbola kely, ary dia ho androm-piainany niova fo. Nandritra izay fotoana izay, Soso-kevitra eto dia noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa.
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: Mitondra atao mba Bodoy ny Kids
Raha mitaingina ny fiaran-dalamby dia mahafinaritra mihitsy sy mijery ivelany dia afaka foana ny ankizy nampiantrano nandritra ny ora maro, Manoro hevitra antsika koa ny fiaraha-mientana ihany koa nitondra ny sasany. Boky mialoha sy hiarovana ny seza varavarankely sady nisy latabatra izay mamela anao nampiely ny fandokoana boky sy tsakitsaky!
Misy soso-kevitra dia ahitana asa fiaran-dalamby:
takela-bato: Mitovy amin'ny fiaramanidina, ny takelaka dia mety ho fomba iray lehibe nitranga ny fotoana. Be dia be ny fiaran-dalamby any Eoropa tolotra Wi-Fi maimaim-poana, fa ny fanompoana tsy azo antoka foana, ka ho azo antoka anao Download sarimihetsika ary ny lalao ao an-trano. On fiarandalamby indrindra, saika isaky ny seza tokana manana ny fivoahan'ny hitandrina ny elektronika nandidy, fa mandidia azy ireo any an-trano na inona na inona – ary hitondra écouteur!
boky fandokoana: fandokoana boky sy ny pensilihazo dia amin'ny toerana tena na inona na inona taona.
Games: Raha afaka hihazona seza sady nisy latabatra, be dia be ny toerana milalao karatra na hafa Travel lalao. Tsy toy ny rivotra Tsidika, ianao dia tsy mila miahiahy momba ny misafotofoto, dia haka ny fianakavianao ny toerana tena lalao, ka mandehana milalao. Mety ho tonga lafatra fahafahana tena hahavita ny fanaovana ampihimamba ny lalao!
Play kilalao: Miankina amin'ny zanakao ny taona sy ny tombontsoa, mitondra fiara, na ny sasany tranon'afokasoka sarivongana hafa (Polly mihevitra paosy). Miseho ny zanako lahy ny latabatra dia racetrack raha mametraka ny zanako vavy ny saribakoly kely mba nampahery azy ireo.
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: Aoka ianao ho fiheverana ny hafa mpandeha
Ny ankamaroan'ny olona dia ho tena fahalalana raha manana zazakely mitomany na tezitra zaza izay mitaky fotoana mba tony. tsy planning mialoha ary mamela ny kely handalina ho fahasorenana noho ny tsy fisian'ny drafitra mety tsy hahazo betsaka fiaraha-miory. Plan fialam-boly izay tsy intrusive na mety ho pitik'afo kevitra. Tsy te hanoratra Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa, izay tsy an'i anao…vazivazy fotsiny!
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: Traveling nandritra ny alina?
Miezaka foana au livre Nisy toerana iray amin'ny natory fiaran-dalamby. Maka levitra fiarandalamby dia mahatahotra, ary ny torimaso lehibe dia matetika noho ny voajanahary hohozongozonina ireo fiaran-dalamby. Tena mahaliana koa dia handeha matory sy mifoha any amin'ny firenena hafa. Matory efitrefitra mitovy amin'ny firenena fa raha telo fotsiny ary tsy te fizarana vahiny eo aminareo dia mety ianao Mila teti-bola hividy fanampiny fandriana hitandrina ny matory mampitohy manokana.
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: Avelao ny tenanareo betsaka ny fotoana, rehefa mahazo eny
Fiarandalamby indrindra dia hitsahatra ihany nandritra ny roa minitra ambony indrindra isaky ny gara, ka manodidina ny dimy minitra eo anatrehanao tonga tokony ho nampirina entana zavatra ny, mampientam-po matory ankizy, mitafy akanjo sy nitondra ny kitapo eny ambony talantalana. Io haavon'ny fikambanana manome be dia be ny fiadanan-tsaina, indrindra raha manana be dia be ny ankizy na ny be dia be ny entana. Raha ny sehatra dia sahirana, antoka ny kitapo handeha eny aloha hiala amin'ny lalana mankany amin'ny varavarana, dia ento midina ny ankizy rehefa afaka izany, mba hisorohana na iza na iza hatao very.
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: Ento ny Stroller On Board
Antony iray hafa mampiasa manofana fa tsy mandeha fiaramanidina dia ny hoe afaka andilany ny ankizy tsara any an-stroller ka hakodian'ny olona azy tsara tao ny fiaran-dalamby, without the headache of having to dismantle and then reassemble the stroller. You can sometimes even park your stroller in the snack area or other open places on the train (toy ny azon'ny faritra raha mbola araka ny tsy nipetraka ny olona iray tao amin'ny seza misy kodiarana), izay manampy ho an'ny ankizy tanora izay matory ao amin'ny stroller. Izany no tombontsoa lehibe ny fiaramanidina mandeha tahaka ny mahazo mahita zanak'osy mba hatory eo amin'ny fiaran-dalamby mora kokoa.
Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa: tonga About 30 Minutes tany am-boalohany
Ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eoropa, na aiza na aiza-kafa eto amin'izao tontolo izao noho izany zavatra izany. Dia ny hanome ny tenanao fotoana tonga! Tsy toy ny rivotra Tsidika, tsy mila tonga any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby lavitra loatra mialoha. Rehefa manao dia lavitra amin'ny ankizy, Manoro hevitra izahay tonga momba 30 minitra maraina hatao ny tenanao toerana, angamba raha kely aloha efitra fandroana fiatoana sy ny sakafo maivana fialan-tsasatra eo amin'ny fandaharam-potoana. matetika, ny dingana kilasimandry dia tsy hanomboka mandra- 10 minitra alohan'ny lasa raha be indrindra, nefa tsy te-scramble ka hahita ny tenanao mihazakazaka amin'ny alalan'ny be atao peo.
Mety ny manan-danja indrindra tendrony rehetra. TSAKITSAKY! Be dia be ny làlana lavitra mampiseho fanompoana manontolo fisakafoana miaraka amin'ny fiara be zanak'osy-namana sakafo – mieritreritra frantsay toast, Nadininy fromazy, meatballs amin'ny penne. Ao amin'ny lalana fohy, Manana trano fisotroana fiarandalamby sakafo maivana fanatitra mofo voasesika, bagels, poti, ary hafa snacks. Azonao atao ny entana sasany ny ankizy amin'ny toerana tena tsakitsaky na inona na inona aza! Mandeha miaraka amin'ny zaza? Mitondra zaza sakafo na raiki-pohy ary anontanio ny sakafo-service mpiasa hamindroana azy io ho anao. Afaka manao famandrihan-toerana fa ny fisakafoana fiara fotoana fohy taorian'ny fiondranana. Toy ny mahazatra, rehefa niara-dia ankizy, fa tokony hataonao foana tsakitsaky sy ny zava-pisotro mitondra, Raha tsy afaka mahazo ny famandrihan-toerana na ny sakafo maivana fisotroana manapa-kevitra ny hanakatona fotsiny ny ankizy, rehefa milaza fa izy ireo mosarena.
Vonona ho be herim-po ny lamasinina nankany amin'ny ankizy ianao ankehitriny fa nitondra ny Soso-kevitra noho ny mandeha lamasinina miaraka amin'ny ankizy? lehibe! Boky ny tapakila amin'ny Save A Train, manahirana-maimaim-poana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)